Wuxuu qeybiyay 577 milyan $, kadibna wuu isdilay. - NorSom News
Wuxuu qeybiyay 577 milyan $, kadibna wuu isdilay.
Jeffrey Epstein oo ahaa maalqabeen u dhashay dalka Mareykanka, isbuucii horena isku dhex dilay xabsiga, ayaa la ogaaday inuu qoray warqad dardaaran ah, isaga oo saxiixay, kana dardaarmay dhamaan hantidiisa.
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay warqadda dardaaranka ninkaasi oo saxiixan in maxkamadda jasiiradda Virgin ee dalka mareykanka lagu soo bandhigay uu ninkaasi ku sheegay maal ka badan $577 milyan oo doolar inuu ninkaasi oggolaaday inuu qasanadda dowladda lagu shubo balse ma sheegin cidda deeqdaasi uu bixiyey uu doonayo in looga faa’ideeyo.
Dhakhtar caafimaad oo ku sugan New York oo meydka ninkaasi baaritaan caafimaad ku sameeyey wuxuu sheegay ninkan dhintay ee 66 jirka ah inuu isku dilay “daldalaad”.
Balse meelna laguma sheegin cidda deeqdaasi lacageed ka faa’ideysaneyso, lacagahaasi oo isugu jira $56 milyan oo doolar oo caddaan ah, hanti ma guurta ah oo u dhiganta $14 milyan oo doolar iyo $18 milyan oo doolar oo gaadiid iyo hanti kale lagu qiimeeyey.
Previous articleNorway oo Faransiiska ka diiday qaabilaada dad qoxooti ah.
Next articleNorway: Xisbiyada xukuumada oo madaxa iskula jira isbuucyo kayor doorashada.